बि’रामीको निःशुल्क उपचारका क्रममा जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसीलाई होटेल बाहिर निस्कन रो’क ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/बि’रामीको निःशुल्क उपचारका क्रममा जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसीलाई होटेल बाहिर निस्कन रो’क !
बि’रामीको निःशुल्क उपचारका क्रममा जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसीलाई होटेल बाहिर निस्कन रो’क !
काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले होटेल बा’हिर नि’स्कन रो’क लगाएको छ । दु’र्गम क्षेत्रका बि’रामीहरूको निःशुल्क उ’पचारका क्रममा विभिन्न जिल्ला हुँदै जुम्ला पु’गेका डा. केसीलाई प्रहरीले रो’केको भिडियो सार्वजनिक भएको छ
जुम्लास्थित होटेल रो’यल गा’र्डेनबाट बा’हिर नि’स्कँदै ग’र्दा दर्जनौँको सङ्ख्यामा उपस्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टो’लीले गे’टमै उनलाई रो’केको हो ।प्रहरीले रो’केपछि डा. केसीले मु’खले भनेर न’हुने भन्दै का’गज दे’खाउन भनेका छन् ।
तपाईँहरूले मुखले भनेर हुँदैन डा. केसीले भनेका छन् कागज लिएर आउनुस् यो म’नपरीतन्त्र च’ल्दैन ।अगाडी ब’ढ्दै गर्दा प्रहरीले बाटो छे’केपछि डा. केसीको प्रहरीसँग केही भ’नाभनसमेत भएको छ ।
च्याउबाट आत्मनिर्भर बन्दै युवा
भक्तपुरका कोरोनाभाइरस संक्रमित वृद्धाको मृत्यु
चैत ११ देखिको बन्दाबन्दीले अति प्रभावित,सार्वजनिक यातायात दुई दिनभित्र चल्ने